Ho an’ny Reporters Sans Frontières, “Ny fahalalahan’ny gazety no vidin’ny demaokrasia” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2019 6:41 GMT
“Ho anao, tendry iray ny vidin'ny fidirana amin'ny vaovao. Ao Shina, mety hampigadra mpanao gazety fito taona an-tranomaizina izany “. Izany no hafatra hitanao amin'izao fotoana izao ao amin'ny tranonkala New York Times ary koa ao amin'ny USATODAY.com.
Manomboka fanentanana nasionaly, mitondra ny lohateny hoe: “Ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety no Vidin'ny demaokrasia” ny Reporters Sans Frontières, fikambanana iraisam-pirenena miaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, miaro ireo mpanao gazety nogadraina na enjehina noho ny asany ary mampiseho ny fanararaotana sy ny fampijaliana azy ireo any amin'ny firenena maro.
Tao anatin'ny fanentanana, nandefa lahatsary tao amin'ny YouTube, “Shot for News?! [tifitra noho ny vaovao?!] ny Reporters Sans Frontières, izay mampiseho tovovavy iray eny an-dalamben'i New York, segondra vitsy taty aoriana dia nisy lehilahy iray voatifitra imbetsaka raha nijoro teo amin'ny toerana iray misy gazety. Toy izao ny hafatra: Tsy tahaka ireo firenena maro hafa, tsy hisanda aina iray na oviana na oviana ny fahazoana vaovao eto. Vao haingana ny RSF no namoaka ny fanadihadiany fanao isan-taona Tondro Fahalalahan-Gazety Manerantany, izay mandrefy ny haben'ny fahalalahan'ny mpanao gazety ao amin'ny firenena miisa 175. Amin'izao fotoana dia maherin'ny 200 ireo mpanao gazety sy mpiasa amin'ny fampitam-baovao voafonja eran-tany. Mpanohitra antserasera 91 no nigadra noho ny asan'izy ireo an-tserasera. Mba hahitana ny laharan'ny firenenao mikasika ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, dia tsindrio ny: